မေ့မရပြီ စိတ်မှာစွဲ … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မေ့မရပြီ စိတ်မှာစွဲ …
မေ့မရပြီ စိတ်မှာစွဲ …
အောင်ရင်တို့ ထူးအိမ်သင်တို့ရဲ့ နာမည်ကျော် သီချင်းလေး … 🎶 အို မေ့မရပြီ စိတ်မှာစွဲ … ဟဲ ဟဲ 🎶 … လို့
လွမ်းချင်းကလေးများချမိရင် အရင်ဆုံးသတိရတာက ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးပါပဲ ။ မြေပေါ် မြေအောက် ကွန်မြူနစ်တွေကပဲ လှော်လှော် ၊ ဆမူဆာ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီးကပဲ ဖွဖွ ၊ တို့ကျောင်းသားများကပဲ တော်လှန်တော်လှန် … စားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်းလွန်းလို့ ကားဂိတ်နေသင်္ဘောအောင်း ဆိုက်ကားဂိတ်ပါမကျန် မဆလ ဘိုနေဝင်းကို အပြုတ်တိုက်ခဲ့ကြတာ ၂၉-နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ ။ “ဆန်တစ်ပြည် ၁၆-ကျပ် စိန်လွင်ခေါင်းကိုဖြတ်” “ရရင်ရ မရရင် ချ ၊ ရရ မရရ ချ” ဆိုပြီး ဇမ်းတင်လိုက်တာ ပိုဆိုးတဲ့ စစ်ဖိနပ်နဲ့ တိုး ၊ G-3 စာမိပြီး လူငယ်တွေ တောထဲရောက်ကုန်တာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ အမှတ်တရပါပဲ ။ အဲသည့်လို အနစ်နာခံခဲ့ကြလို့လည်း ဒီကနေ့ မစိုမခြောက် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေးစာမျက်နှာသစ် ဖွင့်နိုင်ကြတာပေါ့ ။
မဆလ အကြောင်းကတော့ အထူးပြောစရာမလို ၊ “တန်းစီ တိုးစား ၊ ရတာယူထား ဈေးမများ” ဆိုတဲ့ ခေတ်ပါ ။ အိမ်စောင့်အစိုးရနဲ့ “အရသာ” ကောင်းကောင်းသိသွားတဲ့ ဘိုနေဝင်းအတွက် မင်းမြှောင် (ဦး)ကိုကိုမောင်ကြီးတို့ ဦးချစ်လှိုင်တို့က ဖာထေး ဖြတ်ဆက် “မဆလ ဝါဒ” ကြီးကို တက်သုတ်ရိုက်ဖြန့်ချီပြီး ဂျင်းရော စပါးလင်ရော ပဒဲကောရာကျွေးသွားတာ ၊ သာမန်အရပ်သားမပြောနဲ့ နိုင်ငံရေးသမား ကွန်မြူနစ်ဟောင်းတွေတောင် မှိုင်းမိကုန်ပါတယ် ။ အဲသည့်ခေတ်မှာ ဘိုနေဝင်းက ဓမြဗိုလ်လုပ်ပြီး ရသမျှ သူချည်းအကုန် ဝိုက် ၊ သူ့ခြေရာနင်းရင် “စစစ” တို့ “ထောက်လှမ်းရေး” တို့နဲ့ ရှင်းထုတ်တာမို့ အောက်လက်ငယ်သားက အရိုးအရင်းကိုက် အာဏာပြယုံပဲ လုပ်နိုင်တာပါ ။ အဲ … သူ့နောက်မှာ ဆက်ခံတဲ့ စစ်အစိုးရတွေလက်ထက်မှာတော့ ဝေစားမျှစားတွေ လုပ်ကုန်ကြတာ မဆလ ကို သင်ခန်းစာယူပုံရတယ် ။
ဘိုနေဝင်းခေတ်မှာ တံခါးပိတ်ဝါဒနဲ့ ရှိသမျှ အကုန်ပိတ် ၊ သာမန် အရပ်သားများအတွက် သမဝါယမဆိုင်ကနေ ကွာလတီမမီတဲ့ ပြည်တွင်းဖြစ် စားသောက်ကုန် လူသုံးကုန်တွေ ဖြန့်ပေမည့် သူ့တပည့် အရာရှိ ယူနီဖောင်းဝတ်တွေအတွက်တော့ အထူးစပါယ်ရှယ် ထုတ်ကုန်တွေကို “ပဒုမ္မာ” ဆိုင်တွေလို အရောင်းဆိုင်တွေကနေ ဝယ်ယူခွင့်ပေးပါတယ် ။ အဲသည့်တော့လည်း နယ်စပ်ကနေ ခိုးသွင်းတဲ့ “မှောင်ခို” ဆိုတဲ့ ဈေးကွက်ကြီး နေ့ချင်းညချင်း ပေါ်လာတာပေါ့ ။ မော်လမြိုင်မှာ “မိုင်ဒါဈေး” ၊ ရန်ကုန်မှာ “စိန်ဂျွန်းဈေး” ဆိုတာ အဲသည့်ခေတ်မှာတော့ ထိတ်ထိတ်ကြဲပေါ့ ။ “ရှာဖွေရေး” လို့ ခေါ်တဲ့ “မီးရထားရဲ” နဲ့ “အကောက်ခွန်” ဆိုတာ အဲသည့်ခေတ်က ဝန်ထမ်းတွေထဲမှာ စတားပဲ ။ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်စားဖို့ တောကဆွေမျိုးတွေပေးလိုက်တဲ့ ဆန်တစ်ခွဲလောက်ကိုတောင် ခိုးသယ်ရတဲ့ ခေတ်ပါ ။
အဲသည့်လို ကောင်းစားနေတဲ့ မှောင်ခိုသူဋ္ဌေးတွေနဲ့ ဝင်ငွေလမ်းဖြောင့်နေတဲ့ နယ်စပ်က လက်နက်ကိုင် အဖွဲအစည်းတွေကို နှိပ်ကွပ်ဖို့ဆိုပြီး ငွေစက္ကူတွေကို တရားမဝင်လုပ်လိုက်တာ တကယ်တန်း ဘဝပျက်ကုန်ကြတော့ လက်လုပ်လက်စား
ဆင်းရဲသားတွေနဲ့ လူလတ်တန်းစားတွေပါ ။ အဲသည့်လို အထွေထွေ ကြပ်တည်းမှုတွေကြောင့် ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံကြီး ဖြစ်လာတော့ မဆလ အမာခံတွေက ဘိုနေဝင်းမှာ အပြစ်မရှိ ၊ “စနစ်ကောင်းပေမဲ့ လူမကောင်း” လို့ဆိုပြီး အပြစ်တွေပုံကြပါတယ် ။ စေ့စေ့တွေးရင် ရေးရေးပေါ် မဆလ ဘိုနေဝင်း ခွေးကျကျတာ သူ့လူတွေကြောင့်ဆိုတာ ငြင်းမရပါဘူး ။
မဆလ ရဲ့ နာမည်ကျော် “လူနှင့် လူ့ပါတ်ဝန်းကျင်တို့၏ အညမည သဘောတရားများ” ဆိုတဲ့ စာအုပ်အပြာလေးကို အသက် ၅၀-တန်းတွေ ဖတ်ဖူးကြမှာပါ ။ အဲသည့်စာအုပ်ထဲမှာ မြန်မာတွေက ရဲစရာရှိရင် သူများထက်ရဲပြီး ၊ ကြောက်စရာရှိရင် သူများထက် ကြောက်တတ်တယ်ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ ။ ဘိုနေဝင်းကို အာဏာရှင်ဖြစ်စေတာက သူ့ကို အမှန်အမှား ထောက်ပြရဲသူမရှိ ၊ ထောက်ပြရင် မင်းမြှောင်တွေက ရေကြည်အိုင်ပို့မှာဆိုပြီး အကြောက်တရားနဲ့ အုပ်ချုပ်သွားတာ ၂၆-နှစ် တိုင်ပါတယ် ။ မြန်မာတွေ အပင့် အဖား ကြမ်းချက်ကတော့ “အဖေကြီး” ဆိုပြီး အမျက်တော်ရှမှာစိုးလို့ ဝိုင်း ေ-ာမကြတာ “အဖေကြီး” လည်း “ေ-ွးတက်”ပြီး ခွေးကျ ကျပါလေရောဗျား …
အဲသည့်အချိန် မတိုင်ခင်တုန်းက ဦးကျောက်ခဲမှာ လူပျိုပေါက်သာဖြစ်လာတယ် ကျွန်းသစ်နဲ့ ကျောက်မျက်ကလွဲရင် ကိုယ့်နိုင်ငံ ဘာထွက်လို့ ထွက်မှန်းကိုမသိခဲ့ဘူး ခင်ဗျ … ၈၈၈၈ ကျေးဇူးနဲ့မှ စေ့စေ့ငုငု သိရပါတော့တယ် …
“တောမီးလောင် တောကြောင် လက်ခမောင်းခတ်” ဆိုတော့ တောကြောင်ထအောင် တောမီးရှို့တာ အဲသည့်ခေတ်က စစ်တပ်ပါခင်ည ။ ငှင် … မောင်မင်း ဘယ့်နှယ်သိလဲလို့ ငပိကြော်ကျွေးဖို့ အမေးရှိရင်တော့ “In the wrong place at the wrong time” … မောင်ကျောက်ခဲ အလုံသားပါခီည ။ ကုန်လှောင်ရုံ ဂိုထောင်တွေ ၊ စက်ရုံတွေ တန်းစီရှိတဲ့ ကမ်းနားလမ်းမကြီးက နောက်ကျောတင် ရှိတာပါ ။ အခု ဝါးတန်းဆိပ်ကမ်းရှိတဲ့ ကီလီ ဂိုထောင်တွေ ၊ အမှတ် (၂) (၄) သစ်စက်တွေ ၊ ပုလဲနဲ့ငါး (မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း) ဂိုထောင်တွေ ၊ အခု သီရိမင်္ဂလာဈေးဟောင်းနဲ့ အေးရှားဝေါ ဆိပ်ကမ်းလုပ်ထားတဲ့ ထီးတန်း ဂိုထောင်တွေဆိုတာ မနီးမဝေး အပျင်းပြေလမ်းလျှောက်နေကျ နေရာတွေပါ ။
စက်ရုံ အလုပ်ရုံတွေလည်း သပိတ်မှောက် ၊ အရေးတော်ပုံ အရှိန်မြင့်လာတဲ့အချိန်မှာ စစ်တပ်က ဘဏ် (၂) နဲ့ (၃) ကို ဝင်စီးပြီး ငွေတိုက်တွေက ပိုက်ဆံတွေကို သိမ်းပါတယ် ။ နောက်တော့ ပိတ်ထားတဲ့ ဂိုထောင်တွေကို ဖွင့် ၊ စစ်တပ်အတွက် ရိက္ခာတွေသယ်ထုတ်ပြီး အရိုးအရင်းကျန်တာကို သည်အတိုင်း ဟောင်းလောင်း ထားပစ်ခဲ့တာခင်ဗျ ။ မြန်မာစကားပုံမှာ “လွယ်ရင် သူကြွယ်တောင် ဆွဲတယ်” ဆိုတော့ ၊ အခြေခံလူတန်းစားတွေလည်း ရသမျှ ဝင်ဆွဲတော့တာပေါ့ဗျာ ။ အဲသည့်တော့မှ “ဂိုထောင်ဖောက်တယ်” လို့ ပုဒ်မတပ် ၊ စစ်တပ်က တကြော့ပြန်ဝင်လာပြီး ပစ်လိုက်တာ အလောင်းတွေထပ်ရော ။ အဲသည့် ဂိုထောင်တွေလည်း အရေးတော်ပုံလည်းပြီးရော အကာအရံ သွပ်ပြားမပြောနဲ့ အုတ်ခုံတောင် မနည်းရှာယူရအောင် ပျောက်ချင်းမလှ ပျောက်သွားပါတော့တယ် …
၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံနဲ့ စီးပွါးဖြစ်သွားသူတွေလည်း ရှိပါသေးတယ် ၊ ပုဇွန်တောင် ကြက်တန်းက ဘိုင်ကြီးတွေနဲ့ မြို့ထဲက ပေါက်ဖော်ကြီးတွေပါ ။ ဂိုထောင်ဖောက် ၊ စက်ရုံဖျက် … ထွက်သမျှ အကုန် ဒိုင်ခံဝယ် ၊ အကုန်လက်စဖျောက်ပြီး အသွင်ပြောင်းလိုက်ကြတာ အတော် ပရိုကျတယ်ပြောရမယ် ။ နောက်ထပ်အုပ်စုကတော့ မူးယစ်ရာဇာကြီးတွေနဲ့ ကျောက်မှောင်ခိုတွေပါ ၊ ခေတ်ပျက်တာအကြောင်းပြု လက်ရဲဇတ်ရဲ တပည့်တွေနဲ့ နယ်စပ်ကနေ အလျှိုလျှို အင်ပို့လုပ်လာကြတာ ကျောက်တိုင်တံဆိပ် ဖန်ဆီဒိုင်းတို့ ကွန်မက်သာဇင်တို့ဆို အောလပုံ ၊ နံပါတ်ဖိုး ပင်နယ်ဆလင်ပုလင်းခေါင်းချိုးတောင်မှ ၁၀၀-ကျပ်လောက်ပဲ ပေးရတော့တယ် ။
ဂိုထောင်ဖောက်တယ်ဆိုလို့ ပြောပြရဦးမယ် ။ အဲဒါကလည်း သက်စွန့်ဆံဖျား ဓားကိုင်ပြီး ရရာဆွဲရတာဆိုတော့ ရွေးခွင့်မရ ကံထိုက် ဘေထုပ်ဖောက်သလိုပါပဲ ။ တချို့ကျတော့လည်း ကံလိုက်ပြီး ဉာဏ်မလိုက်တော့ ဖောက်စားခံရတာပါပဲ ။ ဥပမာပြောရရင် … အလုံ လွတ်လပ်ရေးကွက်သစ်လို့ခေါ်တဲ့ ကျူးကျော်ရပ်ကွက်က မိသားတစ်စုပေါ့ … ။ ထီးတန်း ဂိုထောင်တွေက သူတို့အိမ်နားမှာဆိုတော့ ဂိုထောင်ဖောက်ချိန် ရှေ့ဆုံးက ဝင်ဆွဲသူတွေပါ ။ အဖြူရောင် ပီနံအိတ်တွေနဲ့ ထည့်ထားတာ ထမ်းလာရင်း စမ်းမိတာကလည်း အစေ့လေးတွေဆိုတော့ ဆန်အိတ်မှတ်ပြီး အခေါက်ခေါက်အလီလီ သူတို့တဲနန်းကို ကဲ့လာကြပါတယ် ။ ရသမျှ သယ်ချလာပြီး ချက်စားတော့မှ ကွိုင်တက်တော့တာပါပဲ ။ ဘယ်လောက်ပြုတ်ပြုတ် နူးလည်းမနူး ၊ သာကူစေ့လည်း မဟုတ်ပြန် … ဘာမှန်းလည်းမသိ ၊ ခဲလေသမျှ သဲရေကျပြီဆိုပြီး စိတ်ဓာတ်ကျနေတုန်း မြို့ထဲက ပေါက်ဖော်တစ်ယောက်က ဒေါ့ဂျစ်ကားနဲ့လာပြီး အဲသည့်အစေ့တွေကို ရသမျှ သိမ်းကြုံးဝယ်သွားပါတယ် ။ သူတို့လည်း အမှိုက်ထဲကငွေပေါ်လို့ ပျော်မဆုံး မော်မဆုံး ။ နောင် စစ်အစိုးရခေတ်မှာ “ပလပ်စတစ် လုပ်ငန်းရှင်” ဆိုပြီး ထင်ရှားကျော်ကြားလာတဲ့ အဲသည့် ပေါက်ဖော်ကို တီဗွီမှာတွေ့တော့မှ သူတို့ရောင်းလိုက်တဲ့ အစေ့တွေက အလွန် အဖိုးတန်တဲ့ “ကော်စေ့” တွေမှန်း သိတော့တယ် …
ခေတ်ပျက်ဆိုတော့ ခွန်နဲ့ အားနဲ့ ဗလနဲ့ဆိုရင် အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောရရင်လည်း မမှားဘူးခင်ဗျ ။ သာကေတဘက်က အိမ်တစ်အိမ်ဆိုရင် ဆန်ဂိုထောင်ဖောက်တိုင်း ရှေ့ဆုံးက ချီတက်ပြီး သယ်ချလာလိုက်တာ အိမ်တောင် ကျိုးကျတယ် ။ အဲသည့်မိသားစုမှာ သားချည်း ၅-ယောက်ရှိတယ်ဆိုလားပဲ ။ မောင်ကျောက်ခဲတို့ ရပ်ကွက်က စည်ပင် ရေစက်မောင်းတဲ့ လင်မယားအဖြစ်ကျတော့လည်း ငိုအားထက် ရယ်အားသန် ။ သူတို့လင်မယားခမြာ ဂိုထောင်ဖောက်တယ်ကြားတော့ အားကြိုးမာန်တက် ချီတက်သွားကြပြီး အပြန်မှာ ဂုန်နီအိတ်နဲ့ ထုပ်ထားတဲ့ အထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်ကို မနိုင့်တနိုင် သယ်ချလာပါတယ် ။ ရပ်ကွက်သူ ရပ်ကွက်သားများလည်း ပိုက်ဆံအိတ်ချိုင်းကြားညှပ် ၊ သူခိုးအားပေးလုပ်မလို့ ဝိုင်းကြည့်နေတုန်း အထုပ်ဖောက်လိုက်တာ ဂုန်လျှော်ကြိုး အပြတ်စတွေဖြစ်နေလို့ လင်မယားနပန်းသတ်ကြပါလေရောဗျား …
ဘာပဲပြောပြော … ခေတ်ပျက်မှာ အသက်နဲ့ရင်းပြီး ဂိုထောင်ဖောက်ထားတာတွေကို သယ်မပြီး ရောင်းချသူတွေရှိလို့ မငတ်ခဲ့ပါဘူး ။ မငတ်ရုံတင်မဟုတ် … စားကောင်းသောက်ကောင်း မစားဖူးတာတွေပါစားရတာဗျား…
တကယ်ခင်ဗျ … အမဲနှပ် စည်သွတ်ဗူး ၊ ငါးသလောက်ပေါင်း စည်သွတ်ဗူး ၊ ငါးသေတ္တာ ၊ အေးခဲ ငါးအသားလွှာ / ပုဇွန်ထုပ် ၊ အသီး စည်သွတ်ဗူး ၊ အသင့်စား ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ် … ဆိုတာတွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ထုတ်လုပ်သည်ဆိုတာ အရင်က မသိခဲ့ပါဘူး ။ ကိုယ်တွေက ပျားဂေဟာ ကြက်ကြော် မေတ္တာမွန်နို့မှုန့် ကျိုက္ကဆံဘီစကွတ်လောက်ပဲ သိတာကိုး ။ ပြည်သူကို မဖြန့်ဖြူးပဲ နိုင်ငံခြားကိုပို့ သူတို့ လူကြီးပိုင်းပဲ ကြိတ်ဝိုက်နေတာ ပုလဲနဲ့ငါး ဂိုထောင်နဲ့ ၊ စက်ဆန်း စက်မှု/စားကုန် ၊ စားဖျော် ဂိုထောင်တွေပေါက်မှ ပေါပေါများများ မြည်းစမ်းခွင့်ရပါတယ် ။ အတော်နိပ်သားဗျ … နေ့ခင်းဘက် မုန့်သည်မရှိလို့ အဆာပြေတောင် ကြော်စားခဲ့သေးတာ …
ရန်ကုန်မြို့မှာ အဲသည့်အချိန်တုန်းက ဆန္ဒပြချိန်ကလွဲရင် မင်းမဲ့တိုင်းပြည်လိုဖြစ်နေတာမို့ လူတွေကလည်း ဓားတွေ လှံတွေ ဂျင်ဂလိတွေကိုင် ၊ လောင်းကစားဝိုင်းတွေကလည်း လမ်းဘေးတင်ပေါ်တင် ၊ ရှမ်းပြည်ဘက် ကရင်ပြည်နယ်ဘက်က အာဝါဒေးပွဲတွေလောက်တော့ ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ် ။ ညနေစောင်းပြီဆိုရင်တော့ ခေါင်းဖြတ်တာ လုယက်တာတွေနဲ့မို့ အပုပ်ချိန်လို့ လူကြီးသူမတွေက သမုတ်ကြပါတယ် ။ တနေကုန် မြို့ပါတ်ပြီး ကင်းထောက်တဲ့ မောင်ကျောက်ခဲလည်း နေ့လည်သာသာ နေမစောင်းခင် အိမ်ရောက်အောင်ပြန် ဝါးတီးဆွဲပြီး အိပ်တော့တာပါပဲ ။
ဝုတ်ကဲ့ … ညရောက်ရင် ရပ်ကွက်လုံခြုံရေးအတွက် ကင်းစောင့်ရဦးမှာခင်ည …
လက်ညောင်းဘီ… ဆက်ရန် …
ပဒုမ္မာတခုထဲမဟုတ်..။ မေတ္တာမွန်ဆိုတာလည်း ရှိသေးတယ်..။
ပဒုမ္မာမှာရောင်းတာ.. ပတ်ကားဘောပင်တချောင်း.. ၁ဝကျပ်တောင်မပြည့်ဘူးလို့ မှတ်မိတာပဲ..။
ပဒုမ္မာ (၂) က ဟယ်လ်ပင်လမ်းထိပ် ထောက်လှမ်းရေး (၇) ဝင်းထိပ်မှာ …
မေတ္တာမွန်ကတော့ စက်ဆန်း ၊ ကလေးနို့မှုန့်တောင် အဲသည့်နာမည်နဲ့ထုတ်သေးတယ်…
အဲသည့်ခေတ်မှာ ယူနီဖောင်းဝတ်တွေလည်း မထူး …
ထုတ်ပြီးရင် အဲသည့်ဆိုင်ရှေ့က ပစ္စည်းကောက်သူတွေဆီ ပြန်သွင်းရတာပဲ …
ဘီအီး ချက်နို့ဆီ ကာဘော်လစ်နဲ့ ငစိန် မီးတုံးက လူတန်းစား ပြယုဂ်ပဲ …
ရွှေဝါ၊ ဧည့်မထ၊ ခြင်းလုံးစွပ်ကျယ် တွေလည်း သတိရမိသား..။
ပဒုမ္မာဆိုင်ကရောင်းတာတွေက.. .. ဒုဝန်ကြီးနှင့်အထက်ပဲ ဝယ်လို့ရတာလို့ ထင်တယ်..။
၁ေ ဒါ်လှကို.. ၇-၈ကျပ်လောက်နဲ့လဲပြီး.. ဝယ်လို့ရတာတွေ..။
ဆူးလေ ဗဟိုမီးသတ်နားက.. သံတမန်ကုန်တိုက် ( နောက်ပိုင်း Escapade ဆိုပြီး ကလပ်ဖြစ်သွားတယ် ) မှာ ဝယ်ချင်ရင် သာမန်အရပ်သားက FE Bank က Earning နဲ့ ဝယ်ရတယ် ။ အစိုးရဈေးက ၆-ကျပ် ၃၅-ပြား ၊ အပြင် မှောင်ခိုဈေးက ရ – ၈ ကျပ် ။ အထူးထုတ် မန္တလေးဘီယာ ပုလင်းပုတွေကနေ သံချောင်း သွတ်ပြားအထိ မှာဝယ်လို့ ရသဗျား ။ ပန်းဆိုးတန်းနဲ့ အခု Park Royal ဟိုတယ်နေရာမှာ (အရင် Auto Car) ကားအရောင်း စင်တာတွေလည်း ရှိဖူးတယ် ။ မဆလနည်းနဲ့ သင်္ဘောသား ရှိုးဂျော့တွေဆီက နိုင်ငံခြားငွေကို ပြန်သဲ့ယူတာ …
ဥိီးကျောက်ခဲရေးတာ ခေတ်လေးတွေတော်တော်ကိုစုံသွားပါတယ်..မမှီခဲ့ပေမယ့် ခုလိုပြန်ရှယ်ရေးပေးတာကျေးဇူးပါ.
မဆလ ခေတ်မှာ အကုန်လုံးနီးပါး မရှိတာ အတူတူပဲ …
ဆင်းရဲ – ချမ်းသာ လူတန်းစား ဒီလောက် မကွာဟဘူး …
ရှိတဲ့သူလည်း သိုသိုသိပ်သိပ် မနေတတ်ရင် နှိပ်ကွပ်ခံရတယ် …
ကျောင်းစိမ်းလုံချည် ၉၉၉ တံဆိပ်တို့ အုန်းပင်တံဆိပ်တို့ ဝတ်နိုင်ရင် ဘူဇွာ …
ဆက်ရန် မျှော် ..
မကြာခင် လာပါမယ် ခီည …
ဆြာတို့က မရေးတော့လည်း ရေးရတော့တာပေါ့ …
မဆလ ခေတ်က ဓားပြကြီး ဘိုနေဝင်း ဓားမိုးပြီး အုပ်ချုပ်သွားတော့ …
တိုင်းသူပြည်သား အကုန် မျက်စေ့ပိတ် နားပိတ် … ပြိုင်ဆိုင်မှုလည်း မရှိ …
အခု … ကလယ် ကလယ်ဖြစ်လာတော့ လိုချင်တာတွေ များလာပြီ … ဟီး
အိမ်​​ရှေ့မှာ ကစား​နေတုန်​း ​ဘေးအိမ်​က အန်​တီကြီးက ထွက်​လာပြီး ​ပြောတယ်​။
‘ သား​လေး အန်​တီတို့အိမ်​ ခဏ သွား​စောင်​့​ပေးဦး။ ​ဈေးက ပြန်​လာရင်​ သား အတွက်​ မုန်​့ဝယ်​ခဲ့မယ်​ ‘
ကိုယ်​လည်​း ဝမ်​းသာ အားရနဲ့ လက်​တစ်​ဘက်​ကို စူပါမန်​း စတိုင်​နဲ့ ​မြှောက်​ပြီး ..
‘အိမ်​​စောင်​့ အစိုးရ .. တက်​လာပြီ … ဝူး .. ဝူး .. ဝူး ..’
ဆိုပြီး ​ပြေးသွားမယ်​ အလုပ်​ … ကျုပ်​ အန်​တီက စိုးရိမ်​တကြီး ​လေသံနဲ့ .. ‘ ဟဲ့ .. ဘာ​တွေ ​ပြော​နေတာလဲ၊ အဲ့လို ​နောက်​တစ်​ခါ မ​ပြောနဲ့’ ရယ်​လို့ တားမြစ်​သ​ပေါ့ဗျာ။
ကိုယ်​က က​လေး ဆို​တော့ ဘာသိမှာလဲဗျ​နော။ အန်​တီ ကို ကြည်​့ပြီး စိတ်​ထဲက​တောင်​ ​ကြောင်​​တောင်​​ကြောင်​ ဖြစ်​သွားမိ​သေးတယ်​။ အိမ်​​စောင်​့အစိုးရ ​ပြောရုံ​လေးနဲ့ ဒီ​လောက်​ထိ ဖြစ်​သွားရတာ … ဘာလားဟ …။
အူး​လေး စာထဲက အိမ်​​စောင်​့ အစိုးရ ဆိုတာနဲ့ ပတ်​သက်​လို့ … ​မေ့မတဲ့ အတိတ်​ တစ်​ခု​ပေါ့ ခီညာ။
ကလေးသူငယ် သဘင်သည် သူရူးတို့ရဲ့ အရည်မရ အဖတ်မရစကားကို …
“အတိတ် တဘောင်” လို့ အယူရှိတာမို့ လန့်သွားတာဖစ်မယ် …
ဒါတောင် အိမ်စောင့်အစိုးရမို့လို့ … နဝတ လို့ အော်လိုက်ရင် … ဟီ ဟိ
​ရေနံဆီ အိမ်​မှာကုန်​သွားပြီ ဆိုင်​မှာ​မေတန်​းစီ
တမိုင်​​လောက်​ဘဲရှည်​ပါသည်​ ထမင်​းချက်​ဘို့ခက်​​နေပြီ ဟင်​းချက်​ဘို့ခက်​​နေပြီ
သင်​းပျံ့ပျံ့ ​မွေးတဲ့​ရေနံဆီ ​ရေနံဆီ။
“မှုံရွှေရည်” သီချင်းလေး …
ရေနံဆီဆိုလို့ ဒီဘက်ခေတ်မယ် မူးရင်ရှုဖို့တောင် ရှာဖို့လွယ်မယ်မထင် …
ကပစ ထုတ် သတ္တုဖြူ ရေနံဆီမီးဖိုလေးတွေ ရှိသေးရင် ထောပြီပဲ …
၈ရ မှ ဖွားတော်မူတာမို့…
ဒိလို ကိုယ်တွေ့ကြုံရတဲ့ လူကြီးသူမတွေ ပြောပြမှပဲ….
ကိုယ်ဖွားတော်မူရာ… ခေတ် အခြေအနေကို ပြန်လေ့လာနိုင်တယ်။
ငယ်ငယ်ကတည်းက အမေတို့ အဖေတို့ ပြောပြတဲ့ ခေတ်ပျက်ကြီးမှာ ခါလည်သားလေး ကျနော့်ကို ပိုက်ပြီး ဘယ်လို
ဘယ်ချမ်းသာ ဘယ်သင်း ဘယ်ဆီရယ်လို့ …ပြော ပြောပြရင်လည်း
ပါးစပ် အဟောင်းသားလေးနဲ့ နားထောင်ခဲ့ရ….
ဒီတစ်ပုဒ် ဖတ်ပြီးပြီမို့…ဦးလေး ရေးထားတဲ့ နောက်တစ်ပုဒ်ဆီ ပြေး ဖတ်တော်မူလိုက်ပါအုန်းမယ်
တကယ် ဒုက္ခရောက်တာက အဲသည့်အချိန်အတွင်း …
နာမကျန်းဖြစ်နေသူ နာတာရှည် ဝေဒနာရှင်တွေရယ် …
ကလေးမီးဖွားတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေရယ် …
အိမ်သား အနိစ္စရောက်တဲ့ အသုဘရှင်တွေရယ် …
အခု Sedona ဘေး စူနီရမ်ပါတ်ထဲမှာ ပဒုမ္မာ တစ်ဆိုင် ရှိတယ် ။
ပဒုမ္မာဆိုင်မှာ ဝယ်ခွင့်က MD / ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင်ဆို ရပါပြီ ။
အကြမ်းဖျင်း 323 စီးတဲ့သူတွေဆို ရပြီ ။ စိတ်ကြိုက်တော့ ဝယ်လို့ မရဘူး ။
ကိုယ်ရတဲ့ လစာထက် ပိုများပြီး ဝယ်ရင် ပြသာနာ ရှိတယ် ။
မဆလ ခေတ်ဦးပိုင်းမှာ သိပ်မဆိုးဘူးဆိုတာ ကျနော့် အဘိုးလည်းပြောပါတယ် …
နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းတွေ ရှိသေးတော့ မဟုတ်တာ မလုပ်ရဲသေးဘူးပေါ့ …
နောက်ပိုင်း ဖြုတ်ထုတ်သတ်နဲ့ ရှင်းပြီးတော့မှ ဂျိုထောင်တော့တာပဲ …
မဆလခေတ်မှာ ဘိုနေဝင်းကလွဲရင် ကျန်တဲ့သူက မဝါးရဲတော့ …
အစိုးရက ထုတ်ပေးတဲ့ Mazda 323 ကိုရောင်းပြီး ပါရမီမှာ အိမ်ဆောက်တဲ့ …
နိုင်ငံတော် ကောင်စီဝင်ကို မှတ်မိမယ်ထင်ပါ့ … ပြုတ်သွားရှာတယ် …
မဆလ ခေတ်က အစပိုင်းမှာ သိပ်မဆိုးပါဘူး ။
ကျနော်တို့ ညီအကို ငယ်ငယ်က SMA နို့မှုန့် အစိုးရဈေးနှင့် ရောင်းပေးတယ် ။
ကျနော် ငယ်ငယ်က လက် တံခါးညပ်တော့ အဖွားနှင့် မြို့ထဲ စစ်ဆေးရုံ ပြေးရတယ် ၊
အဲ့ဒီ စစ်ဆေးရုံမှာ မနက် နေ့လည် ညစာ အကုန်လုံး ဆေးရုံက ကျွေးတယ် ။
မှတ်မိတာက အဲ့ဒီ စစ်ဆေးရုံ မနက်စာမှာ အမြဲတမ်း ကြက်ဥပြုတ် တစ်လုံး ပါတယ် ။